Ifenisha Ehamba phambili YeHhovisi Lakho Lasekhaya | I-Trivoshop
Izinkampani eziningi, kufaka phakathi izinkampani ezinkulu ezifana neMicrosoft, zivumela izisebenzi zazo ukuba zisebenze kude nasekhaya. Uma ungomunye wabo, cishe uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba nendawo ezinikezele lapho uzizwa ukhululekile ukwenza umsebenzi wakho ongcono nsuku zonke. Ukuze uzuze umkhiqizo oduduzayo nenduduzo ehhovisi lakho lasekhaya kufanele ube nefenisha efanele.
Lapho ukhetha ifenisha yakho yasekhaya, naka ukusebenza kwayo nokuthi kungaba mnandi kanjani ngemuva kwamahora angu-8 ukuyisebenzisa. Ngokuya ngohlobo lomsebenzi wakho uzodinga okungenani ideski elilodwa nesihlalo. Ezinye izihlalo ezingezekile zezivakashi kungaba kuhle ukuthi uma amakhasimende akho enquma ukuvakasha kwakho.
Ukuphonsela Ideski Ehhovisi Lakho Lasekhaya
Uhlobo lomsebenzi ozobe usuwenza, nemishini oyidingayo izoba nomthelela omkhulu lapho ukhetha ideski. Nazi ezinye izindawo okufanele uzicabangele lapho ukhetha ideski lakho.
Ingaphezulu ledeski lakho kufanele libe lide futhi lijule ngokwanele ukuze wonke amathuluzi owadingayo angalingana. Mhlawumbe uzosebenzisa i-laptop nje, kepha uma umsebenzi wakho udinga ama-desktop ama-desktop amabili noma isikhala semibhalo ebonakalayo kuzofanela ukhethe itafula elinendawo enkulu.
Uzochitha isikhathi sakho esiningi kuleli deski, ngakho-ke qiniseka ukuthi kuba ntofontofo ukuhlala lapho. Kuzofanela futhi ube nesihlalo sekhwalithi, kepha sizokhuluma ngakho ngokuhamba kwesikhathi. Ideski elihle kakhulu le-ergonomic lizogcina ukuhlangana kwakho kuma-engeli angakwesokudla. Amanye amadeski eza nemilenze eguqukayo, ukuze ukwazi ukusetha ukuphakama nesikhundla osifunayo.
Uma wonke amadivayisi wakho engenawo amanethiwekhi angenantambo ngokugcwele, kuzofanele ucabange ukuthi kuzoba lula kanjani ukuxhuma zonke izintambo onazo. Ukuqapha, ukukhanya, iphrinta, ishaja yeselula, i-router, njll. Sesha ideski elinamachweba entambo, nomgodi omncane ukuze ungasondeli kuwe.
Ideski le-Offex Crank Ideski emile eguqukayo ekunikeza amandla okuthola lelo bhalansi elikhiqizayo lokuhlala nokuma kulo lonke usuku lomsebenzi olude.
Ukukhetha Isihlalo Esilungele Ihhovisi Lakho Lasekhaya
Ngenkathi ukhetha isihlalo, usayizi ungenye yezinto ezibalulekile okufanele ubheke ngazo.
Ukuphakama kwesihlalo kungahlukahluka kusuka ku-16-21 amayintshi kukuvumela ukuthi usishintshe ngokusho ukuphakama okukulungele. Isihlalo sakho kufanele okungenani sibe ngama-intshi ayi-17-20 ububanzi, futhi usayizi ofanele we-backrest ungama-intshi ayi-12-19 ububanzi.
Ngaphambi kokukhetha isihlalo sehhovisi lasekhaya, qiniseka ukuthi senziwe ngendwangu ephefumulayo, ebhekwa njengengcono kakhulu.
Ihhovisi elisebenzayo le-Ergonomic nesihlalo seMidlalo, i-7-Advisable Adableable
Isibani Esedeski Elifanele
Ngokubambisana nokukhanya kwemvelo kosuku, kanye nokhanyiso lwendilinga ethandekayo, isibani esihle sedeski sizokunikeza ukukhanyiswa okubanzi, okunciphisa ubunzima bezinto nokucasuka. Izibani zedeski ehlukahlukene, eguqukayo inciphisa umehluko phakathi kwento ogxile kuyo nendawo ezungezile. Ngale ndlela, uzoba nokugxila okungcono kunemininingwane ngaphandle kokuthi ube nekhanda. Usebenzisa isibani esibandayo sesibani sedeski lakho, uzozizwa ukhiqiza ngokwengeziwe futhi usebenza.
Ngokuphikisana namalambu abandayo, ophuzi angathulisa ingqondo yakho futhi akusize ulungiselele ukulala ngemuva kokusebenza ebusuku kakhulu. Ukuxhumana phakathi kokushisa kombala nokukhiqiza akuchazwanga, kepha abanye abantu bangahle bakhethe ukukhanyiselwa okufudumele kwamahora omsebenzi omude, ngokuya ngomfutho wabo kanye nomsebenzi womsebenzi wabo.
Ukuhlobisa kweDainolite Black Desk Lamp
Ukwakha ihhovisi lasekhaya elikhiqizayo kuqala nedeski elifanele. Ideski elifanelekile lilinganela isikhala samahhala ekhaya lakho futhi kufanele libe nendawo ephezulu oyidingayo ukuze ugcine imishini yakho ihlelekile. Ngaphandle kwedeski, chitha isikhathi sokucinga ngesihlalo esifanele namalambu uyozizwa ukhululekile ukusebenzisa ngaphezu kwe-40h ngesonto.
Kufakwe ku: ifenisha, ihhovisi
I-icon phansi icon esihlokweni esandulele Ungawathengela Kanjani Amabhendi Okufanele Okuphikisa
esihlokweni esilandelayo Okubaluleke Kakhulu Kwe-5 Ehlobo Ubuhle Ebusweni Bakho, Umzimba kanye Nezinwele I-icon phansi icon